Iindawo zokugcina amanzi Ukuthengisa kunye nokuhlawulwa ivuliwe Realtyww Info
Storage room - Palma de Mallorca (Foners) , Built Surface 19m2, Distance to the sea 1.1 Km..Property Features* Reference PM16107* Type of Operation Sell or Rent* Type of property Storage room* Area / City Foners / Palma de Mallorca* Built Surface 19 m2* Condition None* Levels 1* Community fees / eur...
umbono Iindawo zokugcina amanzi ipapashiwe 3 months ago
Indawo yokugcina igumbi lezorhwebo yindawo yokugcina iimpahla. Iindawo zokugcina iimpahla zisetyenziswa ngabavelisi, abangenisi, abathumela ngaphandle, abathengisi, amashishini ezothutho, amasiko, njl.njl. Bahlala bephethe ii-docks ukulayisha nokuthumela iimpahla kwiilori. Ngamanye amaxesha amagumbi okugcina iimpahla ayilelwa ukulayisha nokuthumela iimpahla ngqo koololiwe, kwizikhululo zeenqwelo moya, okanye kwizitishi. Bahlala benamakhreyithi kunye neefolokhwe zeempahla ezihanjiswayo, ezihlala zibekwa kwiipherishi ezisemgangathweni ze-ISO ezifakwe kwiipakethe zepallet. Izinto ezigciniweyo zinokubandakanya nayiphi na impahla eluhlaza, izinto zokupakisha, izinto ezingasasebenziyo, okanye izinto ezigqityiweyo ezinxulumene nezolimo, ukuvelisa kunye nemveliso. KwisiNgesi saseIndiya indawo yokugcina izinto ingabizwa ngokuba yitown.